Musika we smartphone ikozvino une sarudzo yakanaka yemafoni anogona kupengeka kusarudza kubva, kana uri mumusika. Iyo clamshell-maitiro ndeimwe yemhando dzinonyanya kufarirwa dzemidziyo inopeta, ine Samsung inotungamira nzira mukutengesa neGirazi Z Flip3. Kubva pakatangwa mudziyo uyu, HUAWEI yatanga kutengesa foni yayo ine flip function inonzi P50 Pocket. Foni yega yega ine masimba ayo, saka ngatitarisei nzvimbo idzo HUAWEI P50 inozviita zvirinani pane Samsung.
Hapasisina Hinge Gap
Chimwe chezvichemo zvinowanzoitika kubva kuvashandisi veSamsung Galaxy Z Flip3 ndiyo gap riri muhinge. Kana foni yakavharwa yakavharwa, mukaha diki unogona kuwanikwa pakati pezviratidziro zviviri. HUAWEI pavakagadzira P50 Pocket, vakaita shuwa yekugadzira foni isina gap. Saka kana iyo P50 Pocket yakavharwa, ese ari maviri skrini anorara akatarisana.
Iyo P50 Pocket zvakare ine slimmer kuvaka zvachose. Kuyera chete 15.2mm kubva kumagumo kuenda kune imwe kana foni iri padyo, iyo idiki pane 17.1-15.9mm kuyerwa paGirazi Z Flip3.
Kunyange usiri mutsauko unoshamisa, iyo HUAWEI P50 Homwe ine yakakura zvishoma skrini kupfuura iyo Galaxy Z Flip3. Iyo P50 Pocket inokodzera 6.9 ″ kupeta kuratidza pa1188 × 2790, nepo Galaxy Z Flip3 ine diki 6.7 ″ skrini pa1080 × 2640.
Sezvo iwe uri kuwana foni inokwanisa kupeta kusvika kuhafu saizi yayo, kusarudza iyo yakakura kuratidza ingangove zano rakanaka. Chigadziriso chepamusoro zvishoma chinobatsira iyo 21: 9 skrini paP50 Pocket, sezvo mitambo yako, mafirimu, uye maapplication achataridzika zvakanaka pachiratidziro ichi.
Hapana Kupeta Crease
Chimwe chichemo chakajairika nezveGreen Z Flip3 ndechekuti vashandisi vanowana crease inotanga kuumba pakati pechiratidziro, mushure mekushandisa zvine mwero. Iyi zvakare inyaya inowanikwa mune mamwe akawanda maflip mafoni ane aya anochinjika kupeta skrini. HUAWEI inoti yakagadzirisa nyaya iyi yakajairika kusvika padanho rekuti vashandisi havazosangana nayo zvachose paP50 Pocket.
Yakawanda RAM uye Kuchengeta
Kunyange mafoni maviri aya achigovana zvakada kufanana mubhodhi, iyo Premium Edition yeP50 Pocket ichapa 12GB ye RAM uye 512GB yekuchengetedza. Iyo Galaxy Z Flip3 ichave yakakura kunze pa8GB ye RAM uye 256GB yekuchengetedza. Saka iyo yekuwedzera yekuwedzera mundangariro iripo kune chero munhu anoida. Mafoni ese ari maviri anogovera yakafanana Qualcomm Snapdragon 888 chipset, saka unogona kutarisira kuita kwakafanana kubva kune ese ari maviri emidziyo iyi.
Bhatiri hombe rine kukurumidza kuchaja
Kune chero munhu anokoshesa kumhanya kwekuchaja uye mabhatiri akakura, iyo P50 Pocket ichave iri nani sarudzo. HUAWEI yakaisa bhatiri hombe re4000mAh mufoni yavo, iine 40W inokurumidza kuchaja inokwanisa. Iyo Galaxy Z Flip3 ine idiki 3300mAh kugona, uye inokurumidza kuchaja maxes kunze pa15W.
Mukupedzisa, ese ari maviri mafoni isarudzo hombe kune ani nani ari kutsvaga kuti atore foni nyowani, asi iyo HUAWEI P50 Pocket inodarika munzira dzakawanda dzinofanirwa kutariswa zvakanyanya. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo pane iyo HUAWEI P50 Pocket pane yepamutemo peji pano.
The post Iyo HUAWEI P50 Pocket inofananidzwa sei neGirazi Z Flip yakatanga kutanga xda-vatadzi.